कहाँ गयो छाउपडीका लागि निकासा भएको बजेट? » Enavanari
कहाँ गयो छाउपडीका लागि निकासा भएको बजेट?
रोशनी तिरुवाको छाउगोठमा चिसोले कठाग्रीए मृत्यु भयो भन्ने समाचा आएकोकेहि दिन बित्न नपाउदै फेी अर्की महिलाले छाउगोठमा ज्यान गुमाउन पुगिन । बर्षेनी थुप्रै महिलाले यसी ज्यान गुमाउदा पनि यस क्षेत्रमा मानिसहरु छाउ बार्नको लागि निरुत्साहित भएका छैनन् । सकाी स्तबाट यसलाई केहि समय अगाडि अपाधकै रुपमा घोषणा गीसकेको छ त पनि यसको प्रभाव ती क्षेत्रहरुमा पेको छैन जहाँ यो समस्याको रुपमा हेको छ । कुनै केहि घटना भयो भने गाउँमा छाउ नबो भन्दै यसको बिोध नै हुन्छ पुजापाठ पनि हुन्छ दोष कटाउनको लागि । यस्तो पविेशमा एउटी महिलाले मात्र म छाउ बार्दिन भने बस्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले त झन जाडो बडेको छ, जाडोमा कठाग्रीने अनि गर्मीमा सर्प किाहरुले टोके ज्यान जाने संभावना धेै छ । कतिपय चेलीहरु छाउगोठमा नै बलत्काको शिका पनि भएका छन् त त्यहि बलात्काी छाउ बार्नुपर्छ, छाउहुँदा छुन हुँदैन भन्दै समाजमा अवाफ फैलाइहेको अवस्था
छ । धर्मको नाममा घभन्दा बाहिको गोठमा छाउ अर्थात महिनावाी भएको अवस्थामा ाख्दा महिलाहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पहिेको छ । देवी देवताका नाममा अपाध भइहेको छ यसलाई मलजल गर्ने काम पनि भइहेको छ जानिदो नजानिदो दुबै रुपमा । विगत लामो समय देखि अन्ताट्रिय संघसस्थाहरुले अबौ कम खर्चिसकेका छन् भने नेपाल सकाले पनि छाउपडि हटाउनका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न भन्दै थुप्रै कम निकासा गसिकेको
छ । थुप्रै बिज्ञहरुलाई यस अभियानमा लगाए सकाले खर्च गहिेको छ । त त्यो पैसा कहाँ गयो ? के मा खर्च
भयो ? के उपलब्धि भयो ? नत सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको छ न त त्यहाँका जनताले नै कुनै ाहत पाएका
छन् । अहिलेका युवतीहरु लाई छाउपडिमा बस्ने पटककै मन छैन त बाध्यता ज्यूको तिउ छ । पढेलेखेका युवतीहरुलाई पनि सामाजिक पविेशले छाउबार्न बाध्य बनाएको छ । जनचेतनाका कार्यक्रम केहि नभएका होइनन् त सहभागिता महिलाको मात्रै गाइन्छ । जसका काण पनि यो त्यति प्रभावकाी बन्न सकिहेको अवस्था छैन । अर्कोतर्फ यो छाउगोठ पूर्ण रुपमा हट्यो भनेयहाँ धेैको कमाउने बाटो ोकिन्छ । छाउगोठ बिरुद्ध भएका केहि कार्यक्रमहरु पनि सदमुकाममा मात्रै सिमित भएका देखिन्छन् भने अधिकांश छाउपडि बिरुद्धका अभियानहरु काठमाण्डौमा सञ्चालन हुन्छन् त्यो पनि पाँचतो होटलहरुमा । अहिलेसम्मका कार्यक्रमहरु केवल पिोर्ट बुझाए पैसा असुल्ने माध्यममात्रै बनेको जस्तो लाग्छ । धेै अभियानकर्ताहरु छाउपडीका बिरुद्धका अभियान मार्फत थुप्रै देशहरुका सेमिनामा पनि गए आफ्नो पेप प्रस्तुत गे आफ्नो स्त माथी पु¥याउन सफल भएका छन् । नेपालसकाको महिला बालबालिका मन्त्रालयका प्राथमिकतामा नै पर्छन् यस्ता अन्धबिश्वास कुीतिका बिरुद्धमा कार्यक्रमहरु बनाउनु त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नु । त वास्ताविक प्रभावित ठाउँमा के के भए लागानीको सहि सदुपयोग भयो कि भएन त्यो अहिले सम्म लेखाजोखा गएिको छैन । नतिजा बिनाको लगानी कत्तिको उचित हो ? यसका लागि कसले बोल्ने यो प्रश्न खडा भएको छ । कहाँ गयो त यतिका कम जुन छाउपडि हटाउनका लागि खर्च गयिो ? यसलाई खोज्ने बेला आएको छ ।